Paompy Beton Rexroth A7VO55 boom paompy
Ny Boom Pump dia novokarin'ny Elephant fluid Power Co., Ltd, marika malaza vita any Shina. Ny modely A7VO55 dia azo ampiasaina hanoloana ny modely Original Rexroth A7VO55. Manana kalitao mitovy amin'ny tany am-boalohany, vidiny mifaninana kokoa, fanaterana haingana, ary serivisy tsara indrindra aorian'ny varotra.ELEPHANT Fluid Power dia manam-pahaizana momba ny herin'aratra hydraulika mampiditra ny mixer betonika matihanina (kamiao paompy) rafitra hydraulic manohana, fikojakojana ary famatsiana kojakoja.
Ny Boom Pump dia novokarin'ny Elephant fluid Power Co., Ltd, marika malaza vita any Shina. Ny modely A2FO23 dia azo ampiasaina hanoloana ny modely Original Rexroth A2FO23. Manana kalitao mitovy amin'ny tany am-boalohany, vidiny mifaninana kokoa, fanaterana haingana, ary serivisy aorian'ny varotra tsara indrindra.
Ny Boom Pump dia novokarin'ny Elephant fluid Power Co., Ltd, marika malaza vita any Shina. Ny maodely SC034L dia azo ampiasaina hanoloana ny maodely Original HAWE SC034L. Manana kalitao mitovy amin'ny tany am-boalohany, vidiny mifaninana kokoa, fanaterana haingana, ary serivisy aorian'ny varotra tsara indrindra.